Six socialists in Zimbabwe have lost their application to have charges of "conspiring to commit public violence" dismissed.
Civil service workers across Zimbabwe began a five-day strike on Monday, demanding a doubling of wages.
The cross-examination of the prosecution’s star witness resumed on Monday in the trial of six Zimbabwe socialists.
Shock revelations in Zimbabwe socialists' trial
In a shock development, lawyers defending the Zimbabwe "treason trialists" claim the main prosecution witness is a fraud.
Trial continues in Zimbabwe
The trial continues in Zimbabwe of six socialists threatened with long prison terms for showing a video about the Arab Spring.
Police spy gives evidence at trial of six Zimbabwean socialists
Charges reduced for Zimbabwe 'treason trialists'
The charges faced by six socialists in Zimbabwe originally accused of treason have been reduced again.